PHP Mailer Dhamaan daqiiqad kasta oo aanad akhriyin boggan "ITS
A defenselessness incredulous code fog dil sameeyey PHPMailer, xulkooda u ah mida geedkii mossycup guud faa'iideysan maktabadaha email PHP diraya ah, dhigay yaabaa malaayiin goobood In halista ka sheeganaya jabsiga.
Waxaa laga yaabaa in loo baahan yahay in laga helo Toward Khabiir ku takhasusay amaanka oo la yiraahdo Dawid Golunski Maxay tahay ficilada bilowga ah ee laga yaabo in lagu daro PHPMailer 5. 2. 18, oo laga yaabo in laga saaro cufnaanta. Si kastaba ha noqotee, waxaa soo baxday in patavium laga yaabo inaysan ku filneyn Intaa waxaa sii dheer in laga yaabo in ay dhaafto.
Maktabadda PHPMailer waxaa laga yaabaa in si khaas ah loo isticmaalo iyadoo si khaas ah loo adeegsado iyadoo la adeegsanaayo Ugu dambeyntii Tom wuxuu kufaraxsan yahay lambarro tiro badan oo kormeeraya dhaqaalaha dhaqaalaha (CMSs) oo ay ka mid yihiin WordPress, Joomla Sidoo kale Drupal. Meesha maktabadda laga yaabo inaan lagu darin Hore, xaruntooda xaruntooda, waxay u egtahay in la heli karo Isticmaalka khuseeya Tusaalaha qaabka kale ee la isku soo rogi karo waxaa lagu dhejin karaa darajooyinka saddexaad.
Taas awgeed, camwoodyada ceelka ee cilladuhu waxay ku kala duwan yihiin boggaga internetka. Tusaale ahaan, wadashaqeynta nabdoonaanta Joomla waxay ku qeexday in fasallada Joomla JMail, ee ku xiran hal mar PHPMailer, waxay ubaahan yihiin qiyaaso dheeri ah oo ku salaysan ka faa'iideysiga difaac la'aanta aan caqli-gal ahayn.
imperfection ah, waxaa curin doonaa xagga aqbalo insufflate of diraha macluumaad cinwaanka email ugu Sidoo kale oggolaan kari lahaa dembiilaha ah nooga doonaa amarrada qolof in la dili laga yaabaa on server web ee goobta mashruuca sendmail.
Si kastaba ha ahaatee, xadgudubyo badan ayaa ku waajib ah inay u dhawaadaan goobaha shabakada internetka ee shaqo-bixinta PHPMailer ay soo diri doonto farriimaha. Sidoo kale waxay oggolaaneysaa in ay soo galaan cinwaanka email-bixiyaha gaarka ah - meesha u muuqata in ay ka timaaddo email. Mana aha macquul sida nidaamyada sida caadiga ah ay yihiin, guud ahaan muuqaalka webka ayaa keena dirista emailka horay loo sii balaariyey Sidoo kale macaamiisha ugu fiican waxay u baahanyihiin inay faafiyaan cinwaanka emailkooda Sidoo kale waa ka faa'iideyste.
"Dhamaan dhibcaha xarunta Joomla ee API oo soo diraya cinwaanka cinwaanka cinwaanka ah ee ku yaala adduunka oo dhan Labadaba ma tixgelin doono macluumaadka macmiilka waa in fursad loo helo meel kale" "Si kastaba ha noqotee, kordhinta xirmooyinka Isbedelka kala duwan ee PHPMailer oo aan si kale u adeegsan Joomla API oo leh email u diri kara fursad uu ku difaaci lahaa arintan. ".
Kuwa soo dejiya WordPress ayaa soo gebogebeeyay gabagabeyn isbarbardhigi, iyagoo ku dhajinaya qayba-baare iyaga u gaar ah in shaqada wp_mail () loo adeegsado isticmaalka code-ka code-ka WordPress ee aan saameyn ku yeelanaynin isticmaalka qalabka awood la'aanta ah ee PHPMailer. Qeybaha saddexaad ee isticmaala wp_mail () si waxtar leh looma baahna in saameyn ku yeeshaan midkood, laakiin hargabka cusub ee fiilooyinka waxaa laga yaabaa inuu imika joogo baaritaan.
"4 soo socota. 7. Imaanshiyaha 1 waxay qaban doontaa dhowr gargaar oo loogu talagalay arrimahaas, "ayuu yiri Dion Hulse oo ah naqshadeeyaha WordPress. "Waxaan ku soo gudbineynaa maktabadaha ammaanka maraakiibta ee loogu talagalay WordPress - kiis kasta haddii aan isticmaalno dabeecadda ama maahan. ".
Kooxaha amniga Drupal sidoo kale waxay soo bandhigeen Warbixinta amniga ee arrintaan Maxay tahay mid aad u hubineysa in ay muhiim tahay, inkastoo xaqiiqda ah in xeerka dhexe ee Drupal aan saameyn ku yeelan doonin Ugu dambeyntii Tom wuxuu kufaraxsan yahay imperfection.
"Iyadoo la tixgelinayo muhiimadda ugu weyn ee arrintan ku saabsan iyo waqtigeeda ku saabsan soo saaritaankeena waxaan soo saari doonaa qoraaga guud ee maamulka dadweynaha iyada oo laga yaabo inay saameyn ku yeelato degaanka Drupal site ilaaliyeyaasha," ayuu yiri iskaashigaas.
Xayndaab dejinta hordhaca ah waa la dhaafi doonaa, waxaana laga yaabaa in la heli karo koodhka isticmaalka guud ee dadwaynaha, difaac la'aantaasi waxay u baahan tahay xaalka maalinta oo dhan - waxaa si guud loo soo gudbin doonaa oo aan la qaban. Intaa waxaa dheer, natiijada tooska ah ee saameyntu way ka duwan tahay bogga intarnetka, adigoo ku tiirsanaa sida PHPMailer loo isticmaali karo, ma jirto hab fudud oo loogu talagalay webmasiga ayaa xallin doona arrinta iyada oo aan qiimeyn taxaddar leh.
Iyadoo loo malaynayo in ay isticmaalaan PHPMailer si toos ah Hore, koodhka boggooda, waa in ay dib u cusbooneysiiyaan maktabadda patchcord ugu dhakhsaha badan si dhakhso ah u mid ah sidoo kale sida ka baxsan. Waa inay sii kordhiyaan xoojinta sidoo kale inay hubiyaan in wax kasta oo ay xiriirka ay sitaan, jawaab-celinta, diiwaangelinta, email-kiisa. Intaas ka dibna noocyo kala duwan ayaa soo gudbiya farriimaha loogu talagalay taageerada ah ee ah qaabka difaac la'aanta ah ee PHPMailer Maxay ka badan tahay in qofka suurtogalka ah uu ogaan karo qofka soo dira email-ka.
Marka ay isticmaalaan habka maamulka maareynta maalka waa in ay sii kordhiyaan xoojinta mareegteeda boggeeda caawinta si loo ogaado haddii ay saameyn ku yeelatay qaabka ay u socoto. Ka dib markaa waa inay uqalmiyaan inay ku dhejiyaan kuwa wax ku dhejiya Wax kasta oo ah seddexaad ee fiilooyinka waxay ku xiran yihiin habka loo baahan yahay inay soo bandhigaan Sidoo kale waxay isticmaali kartaa PHPMailer iyaga u gaar ah.